Amanqaku kaSuzy Viola Martech Zone |
Amanqaku ngu USuzy Viola
IiSalon zityala imali eninzi kwindawo yabo, abasebenzi babo kunye neengcali, izixhobo zabo, kunye neemveliso zabo. Nangona kunjalo, inye into abahlala beyityeshela yokutyala imali kwimikhankaso yabo yentengiso. Abaxhasi banokuyifumana njani i-salon yakho emnandi ngenye indlela? Nangona intengiso inokuba yinto ekhohlisayo ukuyilawula, isalawuleka, kwaye akukho mfuneko yokoyikisa. Zininzi izimvo zokuthengisa ezizanyiwe zavavanywa iisalon ezisebenza kakuhle ekutsaleni